12 Tsy misy fomba very hanodinana ny fiainanao - Blog
12 Tsy misy fomba very hanodinana ny fiainanao
Amin'izao fotoana izao dia tsy mandeha amin'ny fomba tianao ny fiainanao. Ary ny ahiahinao lehibe dia ny mety hiharatsy ny raharaha raha tsy mihetsika ianao izao.
Te hanodina ny fiainanao ianao ary hamerina azy amin'ny làlana tsara kokoa ho an'ny ho avy.
Rehefa dinihina tokoa, ianao dia mety tsy ho amin'ny toerana tsara indrindra na amin'ny lafiny ara-tsaina na ara-tsaina, ary fantatrao fa mila asa be dia be hanatsarana ny toe-javatra sy ny vinavina.
Aza mahatsiaro ho tototry ny zava-drehetra, fa miezaha handray dingana iray isaky ny mandeha. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanampy anao eny an-dalana.
1. Ekeo ny olana.
Alohan'ny hahafantaranao Ahoana hanodinana ny fiainanao dia mila apetrakao hoe inona marina ilay tianao hanovana.
Betsaka amintsika no miteny hoe 'hiara-miasa ny aiko' na 'mila miasa samirery aho,' ary avy eo mandany herinandro roa amin'ny sakafo, amin'ny gym, na mitady asa vaovao.
Avy eo, lany etona izahay satria tsy nisy niova ary tsy tena azontsika antoka hoe inona ny antony manosika anay.
Raha te hanao fanovana maharitra ianao dia mila mamantatra izay tena tianao hatsaraina.
Manaova lisitr'ireo zavatra tianao hiasa - mety ho ny hatsaranao, na ny asanao, na koa ny fifandraisanao.
Raha tsapanao fa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiainanao dia mila tanjona mazava ianao raha te handamina ny raharaha.
Aza adino ny momba anao amin'ireo olana mahazo anao. Mety ho mafy be izany ary mety hahatonga anao ho menatra na meloka. Tadidio fa ho anao ity dingana ity, ary ianao irery ihany no mila mahafantatra izay tena mitranga.
Angamba mila miatrika fiankinan-doha ianao, na mamela fifandraisana izay fantatrao fa tsy mety aminao. Tsy zavatra ilainao handefasana amin'izao tontolo izao ireo, fa ny fanekena azy ireo fotsiny dia mety hitondra fiovana lehibe amin'ny fahatsapana antony manosika anao hanao fanovana sy hanatsara ny fiainanao.
ahoana no hahafantarana raha efa ampiasaina ianao
2. Mifantoha amin'ny tenanao.
Mba hanodinana ny fiainanao dia mila ataonao ho lohalaharana amin'ny toerana rehetra ianao raha mety. Raha mifantoka amin'ny tenanao ianao dia mety hahatratra ny tanjonao.
Mety mila manapa-kevitra sarotra ianao, fa ireo mahalala anao sy tena miahy anao dia ho takatrao rehefa misy vokany eo aminy koa ireo fanapahan-kevitra ireo.
Ny fanoloran-tena ho anao amin'ny fomba toy izany dia midika fa mety mila manao laharam-pahamehana amin'ny alina alohan'ny torimaso ianao, ary noho izany dia aza miteny amin'ny zazalahy na zazavavy alina. Mety tsy maintsy mandà hetsika ara-tsosialy ianao satria fantatrao fa mila miala sasatra amin'ny fisotroana izao.
Na inona izany na inona, ny fametrahana ny tenanao ho lohalaharana dia tsy tia tena amin'ity toe-javatra ity - zava-dehibe amin'ny fahombiazanao izany, ary tena hanasoa ireo manodidina anao koa.
Manokana fotoana kely hifantohana amin'ny tenanao sy ny fiainanao dia zava-dehibe na dia manana olon-kafa miankina aminao aza ianao, toy ny ankizy. Azo antoka fa tokony ho laharam-pahamehana ihany koa ny fahasambaran'izy ireo, fa miezaha mandanjalanja ny filan'izy ireo sy ny anao fa tsy araraka aminy daholo ny zavatra rehetra ary avelao ho foana ny kaopinao.
3. Makà fotoana kely hialana sasatra.
Alohan'ny handehanantsika amin'ny dingana maromaro hafa dia afaka manomboka mandray dieny izao ianao, ilaina ny mahatadidy fa tena ilaina ny fitsaharana.
Na dia tsara koa aza ny mazoto sy mientam-po amin'ny fandrosoanao dia mila mandany fotoana matetika matetika ianao. Hanampy anao hitoetra ho salama sy hikajiana mandritra ny dianao io, ary hanome fotoana anao hisaintsaina ny fandehan'ny raharaha.
Ny fitsaharana dia tsy midika hoe mipetrapetraka tsy manao n'inona n'inona. Mety hidika ho fanarahana fialamboly izay manampy anao hiala sasatra sy hanamaivana ny fanahianao, na dia misy fanatanjahantena ara-batana aza izany.
Ny fandehanana an-tongotra eo amin'ny natiora, ny fikolokoloana ny zaridainanao, na ny fitendrena zavamaneno dia hetsika rehetra izay mahatalanjona ny fahasalamanao ara-tsaina.
4. Omano ny andronao.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanodinana ny fiainanao dia amin'ny alàlan'ny fandaminana. Toa mankaleo, fantatsika, fa hanisy fiovana lehibe toy izany.
Raha mikasa tanjona manokana ianao, toy ny fahazoana asa vaovao, dia tena hanampy anao ny fananana fandaharam-potoana hiasana.
Azonao atao ny mametraka dingana tsotra raisina, toy ny adiny iray isan'andro hiasana amin'ny CV anao, ora vitsivitsy amin'ny faran'ny herinandro hangataka asa, ary azonao atao ny manara-maso ny datin'ny fisoratana anarana ary manasa mora foana ny fanadinadinana. Izany dia hahatonga ny fizotran'ny dingana rehetra ho kely saina kokoa noho izay mety hitranga, ary hanana drafitra mazava sy mazava hanaraka sy hanaraka ianao.
Ampio amin'ny hetsika ara-tsosialy ataonao, toy ny fanoratana amin'ny asabotsy atoandro miaraka amin'ireo namanao, na ny antsonao amin'ny alakamisy hariva. Avy eo ampio amin'ny fanoloran-tena mahazatra, toy ny antso miaraka amin'ny fianakavianao na baolina kitra miaraka amin'ny ekipa. Avy eo ianao dia afaka manampy amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena sy hetsika ara-pahasalamana, toy ny fanaovana gym na fisaintsainana alohan'ny hatory roa alina isan-kerinandro.
Mety ho toa mahery izy io, nefa mety! Ny fampiasana loko hafa ho an'ny lohahevitry ny hetsika tsirairay dia hanampy anao haka sary an-tsaina ny herinandronao sy handanjalanjana azy mba hahazoana antoka fa eo amin'ny làlana hahatratra ny tanjonao ianao. Mampiasà loko iray ho an'ny hetsika ara-tsosialy, ny iray ho an'ny fanatanjahan-tena, ary ny iray ho an'ny fahasalaman'ny saina.
Hanomboka hahita haingana ianao raha misy hetsika ara-tsosialy marobe noho ny soa, izay afaka manampy anao hiasa amin'ny fomba fiaina mandanjalanja kokoa. Azonao atao ny manampy hetsika fanampiny izay dingana hahatratrarana ny tanjonao, toy ny fivoaran'ny tena manokana, fanomanana dinidinika ary ny fitsaboana ho an'ny mpivady, ohatra.
Manaova tabilao mandritra ny herinandro ary ampio izay sakafo nohaninao - izany dia hanampy anao hifantoka amin'ny tanjon'ny fahasalamanao, ohatra, satria afaka manaraka drafitra iray ianao ary tsy dia hanafatra ny handray! Ampio sakafo haingana mandritra ny alina fantatrao fa tara ao an-trano ianao avy any am-piasana, ary mahandro ampahany roa heny hampiasaina amin'ny sakafo atoandro ny ampitso na mangatsiaka.
ny fomba tsy hieritreretana ny sipako taloha
5. Tombano ary omeo valisoa ny fandrosoanao.
Ny fandinihan-tena dia ampahany lehibe amin'ny fametrahana sy hahatratraranao ny tanjonao. Ny manao an-jambany zavatra mitovy hatrany hatrany hatrany dia tsy handeha mihitsy, satria tsy ho fantatrao mihitsy raha mahavita zavatra na tsia!
Raha tena te-hanova ny fiainanao ianao dia mila mandany fotoana matetika matetika hanarahana ny fahombiazanao - ary avy eo mankalazà azy!
Nahatratra tapa-bolana tsy nisotroana? Tsara izany, dingana lehibe iray io ary tokony hahatsapa ho mirehareha amin'ny tenanao ianao!
Angamba ianao nahazo tafatafa tamina asa vaovao - azo antoka fa mety tsy manana ilay asa ianao (mbola!), Saingy dingana lehibe ity ary tokony hanome anao fahatokisan-tena lehibe, ka raiso izy ary ankalazao toy ny dingana iray ny lalana marina.
Ny fieritreretana ny zavatra tsapanao amin'ny dingana samihafa amin'ny dianao dia hanampy anao hifantoka ihany koa. Raha manara-maso matetika amin'ny tenanao ianao ary mahatsapa fa mahatsapa ho salama sy sambatra kokoa ianao, dia ho voatosika kokoa hanao ny zavatra ataonao.
Mitehiriza diary, na soraty ireo naoty fohy momba ny zavatra tsapanao, ary avereno vakio izany rehefa manana andro sarotra ianao ary hadinonao ny antony anaovanao an'ity ezaka rehetra ity.
6. Ataovy tsy tapaka izany.
Betsaka amintsika no mahatsapa fa mila manana fanavaozana goavana ary manova ny fomba fiaina lehibe, toy ny mivoady tsy hanao velively HATRANY mihinana sôkôla indray, na manapa-kevitra ny hanao fampihetseham-batana isan'andro.
Na dia tanjona mendri-piderana ireo aza amin'ny lafiny sasany, dia tsy ny fomba tsara foana hahombiazana. Aza manao fanoloran-tena lehibe fa omeo zavatra kely hifanarahana tsy tapaka.
Ohatra, manolora tena hisotro rano 5 vera isan'andro. Tsy tanjona goavambe izay ilainao handanianao vola be izany - zavatra kely azonao atao isan'andro amin'ny dia ataonao hihatsara ny tenanao.
Arakaraka ny maha-zava-misy sy mifanaraka ny tanjonao no ahafahanao mifikitra aminy. Isika rehetra dia hilavo lefona amin'ny fotoana iray raha tsy very vato isan-kerinandro isika, noho izany dia omeo tifitra tsaratsara kokoa amin'ny fahombiazana maharitra ianao amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo fanovana kely azo tantanana.
7. Mifantoha amin'ny fihetsika tsy tanteraka.
Rehefa manapa-kevitra ny hampiova ny fiainantsika isika dia matetika no maniry ny hahatonga ny zava-drehetra ho lavorary, ary noho izany dia mieritreritra fa mila manao zavatra lavorary mba hahatratrarana ireo valiny ireo.
Mety hidika izany fa isika mahatsiaro diso fanantenana amin'ny tenantsika rehefa tsy manam-potoana hanaovana fanazaran-tena mandritra ny adiny iray manontolo, ohatra. Izahay dia raikitra amin'ny fahazoana adiny iray sy ny tenanay tsara indrindra, ka hadinontsika fa na dia ny fanaovana 20 minitra aza dia hisy fiovana lehibe.
Toy izany koa, mety hanana andro iray hihinanana sôkôla iray isika - tsy midika izany fa rava ny andro dia midika fa mbola manao tsara kokoa noho ny teo aloha isika, rehefa nihinana sôkôla 170, ohatra!
Raha tokony hanana saina «rehetra na tsy misy» dia ekeo fa ny sasany, ny ezaka tsy tanteraka dia tsara kokoa noho ny tsy misy mihitsy! Hanampy anao hijanona ho zava-misy izany ary hanampy anao hifikitra amin'ny zavatra lava kokoa koa.
8. Manangana rafitra mpanohana matanjaka.
Ny famadihana ny fiainanao dia mitaky faharetana sy fanohanana, ka ampidiro ao ny olon-tianao arak'izay ahatsiarovanao azy.
Mety tsy mila na mila manambara ny antony rehetra anaovanao io fanovana io ianao, saingy azonao atao ny mampiditra azy ireo amin'ny dingana sasany.
Ny fananana olona manodidina hanampy anao dia tsy midika hoe malemy ianao! Midika izany fa tena maniry hahatratra ny tanjonao ianao, ary fantatrao fa ny fananana ireo olon-tianao hanohana anao dia hanamora izany.
Tsy maninona ny manantona sy mangataka antony manosika na torohevitra. Azonao atao ny mangataka namana iray hanampy anao amin'ny fanomanana tafatafa amin'ny asa vaovao, na angataho ny mpianakavy iray hanampy anao hahafantatra teti-bola tsara na paikady mitahiry vola.
Tsarovy fa tsy hitsara anao izy ireo amin'ireo zavatra ilainao fanampiana dia hireharehany tsotra izao amin'ny fanovana manomboka hataonao.
9. Mamolavola fahaiza-manao vaovao.
Raha ao am-ponao ny toe-tsaina manova ny fiainanao, saingy tsy azonao antoka ny fomba hanatanterahana izany dia mety mila mianatra fahaiza-manao vaovao ianao.
Mety ilaina izany mba hahatratrarana ireo tanjona kendrenao, toy ny fiofanana ho an'ny asa vaovao na ny fanatanterahana tanjona ara-batana.
Hanampy anao amin'ny fahatokisan-tena ihany koa izany, izay hanome anao tombony amin'ny ankapobeny amin'ny dianao manatsara ny tenanao.
Betsaka amintsika no mahatsapa fa mila manova ny fiainantsika satria tsy matoky tanteraka ny safidy raisintsika isika. Manontany ny fanapahan-kevitray izahay ary manahy fa tsy manao ny tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra izahay. Raha izany dia tsy mahatsiaro afa-po mihitsy isika ary noho izany dia mahatsapa foana fa mangidihidy ny ‘manamboatra’ zavatra.
Ny fianarana fahaiza-manao vaovao dia afaka manome toky antsika - mampiseho amintsika ny fahaizantsika sy ny lafiny maha-izy antsika izany.
Hatraiza ny fahatsapana rehefa mahay manao zavatra tsy noeritreretinao ho vitanao? Na mihazakazaka lavitra noho ny nihazakazanao teo aloha ianao, manamboatra fanaka hatramin'ny voalohany, na mamorona zavatra tsara jerena rehefa resy lahatra ianao fa tsy nanana taolana kanto tamin'ny vatanao!
Ny fampivelarana fahaiza-manao vaovao dia hanampy anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny tenanao, satria misafidy ny hanao zavatra ho anao ianao. Manokatra varavarana misokatra ho an'ny fotoana tsy afaka nidiranao teo aloha koa io.
10. Andramo ny mampiasa fampiharana finday.
Betsaka ny fampiharana mahatalanjona any izay afaka manampy anao amin'ny ezaka ataonao hanodinana ny fiainanao.
Mikendry ireo mamokatra izay azonao andrefesana ny tanjonao, na ireo mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena izay manara-maso ny fandrosoanao.
Betsaka amin'izy ireo no maimaim-poana, na manolotra vanim-potoana fitsarana maimaim-poana, noho izany tsy misy antony tsy hijerena izay misy any.
11. Manaova safidy salama kokoa.
Izahay dia efa nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fametrahana tanjona azo tanterahina ary ny fandraisana fepetra tsy tapaka hanatrarana azy ireo, saingy izany dia mila ampiana safidy am-boalohany fanohanana.
Ny fanaovana safidy tsara dia tsy resaka sakafo ihany! Mety ny fanaovana safidy iray izay manome laharam-pahamehana ny fahasalamanao ara-tsaina - toy ny tsy fandehanana misavoritaka amin'ny alina satria fantatrao fa hitebiteby ianao ny ampitso, na hitady asa vaovao satria fantatrao fa mampihetsi-po anao ny toetranao ankehitriny. .
Amin'ny fametrahana ny fiadananao ho lohalaharana, dia ho hitanao fa mora kokoa ny manao safidy tsara aminao. Rehefa dinihina tokoa, maro amintsika izay te-hanitsy ny fiainantsika angamba no manao izany satria fantatsika fa ny sasany amin'ireo safidintsika fomba fiaina dia tsy mipetraka eo akaikintsika.
Mety ho sarotra ny mametraka ny fahasalamanao ho lohalaharana, indrindra raha ao anatin'ny fahazaran-dratsy ianao, saingy ilaina amin'ny fahombiazana izany. Hanomboka haingana ianao hahatsapa ho tsara kokoa, ary avy eo dia maniry ny hanohy hahatsapa ho tsara ianao - ary amin'izany dia manohiza mandray fanapahan-kevitra lehibe mba hitazomana ny fomba fijery vaovao salama sy falifaly amin'ny fiainana.
Mazava ho azy, misy zavatra sasany mila fanohanana sy fahaizana ivelany bebe kokoa.
Raha tsapanao fa ny olanao dia mitaky yoga mihoatra ny sy ny mpandamina isan-kerinandro misy loko misy loko, dia mety te hieritreritra mitady fanampiana matihanina ianao.
Tsy misy mahamenatra raha resaka torohevitra na fitsaboana na fampianarana momba ny fiainana no resahina. Tokony hirehareha ianao fa eo amin'ny sehatra izay nanaovanao fa afaka mahazo tombony amin'ny fitarihana fanampiny ianao.
Mitaky zavatra be dia be ho an'ny olona ny mahatsapa fa mety mila fanampiana amin'ny zavatra toy ny fiankinan-doha sy ny fomba fitondran-tena tsy mahasalama izy ireo ary izany no dingana voalohany.
Mety tsy hiady amin'ny olana manahirana anao kokoa ianao nefa mety hahazo tombony amin'ny torohevitra na ny coaching. Mety ho hitanao fa manome tosika ny fahasalamanao ara-tsaina izany, izay hanome anao fotoana bebe kokoa hahatratrarana ny tanjonao.
Mety ho tianao koa ny manana olon-kafa miresaka zavatra mba hiantohana anao fadio ny famerenana ireo hadisoana nataonao taloha ihany .
Aza adino fa ny dia ataon'ny olona dia hitovy tanteraka amin'ny anao. Midika izany fa izay mety aminao dia mety tsy mandeha amin'ny olon-kafa, ary ny mifamadika amin'izany.
Ny singa sasany amin'ity lahatsoratra ity dia hiasa ho anao, ary ny sasany tsy hanao - ny ampahany mahafinaritra (ary indraindray sarotra) dia mitady izay mety aminao sy ny toerana misy anao izao.
Rehefa mandroso ianao dia mety te hanandrana fomba maro samihafa, na hanova izay ataonao arakaraka ny halehiben'ny tanjonao.
Mijanona eo - be herim-po ianao amin'ny famakiana ity lahatsoratra ity ary amin'ny fanekena fa te hanova fanovana ianao. Misy ny fanohanana raha ilainao izany, ary matanjaka noho ny fantatrao ianao.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hanodinana ny fiainanao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
10 Tsy misy fomba Bullsh * t haharitra amin'ny fiainanao
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny indray ny fiainanao: dingana 12 tokony horaisina
Ahoana ny fomba hampatanjahana ny tenanao: Fomba 16 hahatsapana hery
ahoana U milaza raha misy ankizivavy tia anao
inona no mila fantatro momba ny fiainana
ahoana no ampahafantaro ny olona iray fa tianao izy
inona no dikan'ny hoe ao anaty fifandraisana vita fanoloran-tena